पूर्वका ठूला इतिहासकार इमानसिं चेम्जोङ
समाचार शनिबार, पुस २२, २०७४
इमानसिं चेम्जोङ (१ जनवरी १९०४–८ अक्टोबर १९७८) को देनको जति चर्चा गरे पनि कम हुन्छ।
इमानसिं चेम्जोङ पाँचथरको वसाङ्गुबाट कालेम्पोङको रिङकेबुङ बसाइँ गएका मेघवरसिंह र दावापुहाङ्मा चेम्जोङका सन्तान थिए । उनले कलकत्ताको सेन्टजेभियर कलेजमा बीएसम्म पढेर व्यावसायिक जीवन शुरू गरे, सिक्किमको गेजिङ र गान्टोकमा शिक्षकको रूपमा ।
दुवै ठाउँमा गरी उनले सन् १९४२ देखि १९४६ सम्म पढाएको बुझ्न्छि । सुवेदार बाजबिर थलङ, लालसोर सेन्दाङ, जसहाङ मादेन खेवाहरूको प्रभावले उनी शिक्षकबाट लिम्बू लिपि, भाषा–साहित्य र इतिहासको अध्येता बनेको देखिन्छ ।
चेम्जोङले १९२८–१९७४ को बीचमा लिम्बू जातिका मुन्धुम (सामाजिक इतिहास), इतिहास, भाषा, संस्कृति/संस्कार र दर्शनका दर्जनौं पुस्तक प्रकाशनमा ल्याए ।
१९५२ मा नेपाल आएका उनले १९६१ देखि १९७५ सम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा किरात इतिहास तथा संस्कृतिविद्का रूपमा काम गरेका थिए । त्यसको तीन वर्षपछि दार्जीलिङमा उनको देहान्त भयो ।
२०५५ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले चेम्जोङको तस्वीर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशनमा ल्यायो भने उनको जीवनी कक्षा १० को नेपाली पुस्तकमा छापियो ।
लाप्चा भाषाका साथै अन्य विभिन्न जातजातिका इतिहासबारे पनि कलम चलाएका चेम्जोङले लिम्बू जातिको इतिहास खोज्न लिम्बूवान, दार्जीलिङ र सिक्किमलाई अध्ययन–अनुसन्धानको क्षेत्र बनाए ।
उनले लिम्बूका नाममा जारी तिब्बती दलाई लामाको स्याहामोहर, सेनकालीन स्याहामोहर, शाहकालीन लालमोहर, सनद, रुक्काहरू संकलन गरेका छन् । पाण्डुलिपि र वंशावली टिपोटको पनि उत्तिकै संकलन गरेका चेम्जोङले त्यतिबेला थुम–थुमका सुब्बाहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
नेपालमा ब्रिटिश रेजिडेन्ट (राजदूत) रहेका ब्रायन हग्टन हज्शनले १८४० पछि दार्जीलिङ बसेर सिक्किम र नेपालबाट थुप्रै सामग्री संकलन गरेका थिए । अंग्रेजले भारत छोडेपछि ती सामग्रीहरू इण्डिया अफिस लाइब्रेरी (बेलायत) पुगे, जसलाई अहिले ‘हज्शन पाण्डुलिपि’ भनिन्छ ।
१९५५ मा प्रोफेसर आर.के. स्प्रिग ती सामग्रीहरू लिएर नेपाल आएका थिए । सिरिजङ्गा लिपि पढ्न जान्ने मान्छे खोज्दै हिंड्दा स्प्रिगले चेम्जोङलाई इलाममा भेटे । ती सामग्रीमा चेम्जोङले सिरिजङ्गाले लेखेका मुन्धुम र खाहुन (उपदेश) पाए ।
चेम्जोङले त्यहीं पाए, जोभानसिं फागोले लेखेर हज्शनलाई बुझएको गोर्खालीसँग भएको राई (खम्बू), लिम्बू र याख्खाहरूको युद्ध वर्णन र लिम्बूका सामाजिक संस्कारका टिपोट पनि । फागोको टिपोटले चेम्जोङलाई पूर्वको इतिहासको प्रारूप तयार गर्न ठूलो सहयोग गर्‍यो ।
उनको इतिहास लिम्बूवान र विजयपुर राज्यमा बढी केन्द्रित छ । विजयपुरमा लिम्बूहरूको शासन भएको औंल्याएका चेम्जोङले ब्रिटिश इतिहासकार फ्रान्सिस् बुखानन् ह्यामिल्टनले लेखेको (१८१९/१९८६/१९९०) विजयपुरको धुमिल इतिहासलाई स्पष्ट पार्न खोजे ।
ह्यामिल्टनका अनुसार, विजयपुरमा विजयनारान राजा र उनका छोरा सिंग राय खेबाङ चौतरिया थिए । उनीहरू उत्तरतिरका पहाडी भेगबाट आएका थिए ।
चेम्जोङका अनुसार, पन्ध्रौं शताब्दीमा विजयपुरमा साङलाइङको शासन थियो । त्यसपछि पुङलाइङ, अमर राय, कृति नारान, चारै नारान, इङदिन नारायण र विजयनारानले शासन गरे ।
विजयनारानका चौतरिया मुरेहाङ खेबाङ थिए । फेदापे लिम्बूहरूको तुम्बाहाम्फे वंशावली (२०६३) मा वि.सं. १८१४ मा टिपिएको साङलाइङका पुस्ताहरूको टिपोट छ ।
वंशावलीमा फेदापेहरूका पुर्खा वानहाङफुङ विजयपुरको राजकाज थाम्न गएको बेला उनकी श्रीमतीले देवरको सन्तान जन्माइन् । पछि ती सन्तानको अंश सम्बन्धी मुद्दा विजयपुरसम्म पुग्यो ।
यसले विजयपुरमा फेदापे लिम्बूहरूको पहुँच थियो भन्ने देखाउँछ । चेम्जोङले भनेका मुरेहाङ खेबाङ र ह्यामिल्टनका खेबाङ एउटै हुन् भन्ने पुष्टि पनि हुन्छ ।
चेम्जोङले नै गोर्खालीसँगको युद्धको लिम्बू नायक काङसोरेलाई चिनाउने काम गरेका हुन् । उनले अरुण र सभाया खोला तथा चैनपुर र दुम्जाबीचको लडाईंमा काङसोरे मारिएको अनुमान गरेका छन् ।
काङसोरे र रघु रानाको लडाइँबारे ‘हज्शन पाण्डुलिपि’ को खण्ड ८५ मा पाइएका ‘सभाया घाट’, ‘सभाया दोभान’ र ‘सभाया वादो’ जस्ता शब्दहरूले त्यही बुझाउँछ ।
अरुण नदी र सभाया खोलाको दोभान सभाया दोभान वा सभाया घाट हो । सभाया वादो (संगम) चाहिं बाह्रबिसे बजारको लंकुवाखोला, सभाखोला र भोटीखोलाको संगम हो । चेम्जोङले पाण्डुलिपिमा पटक–पटक आउने ‘फागो’ शब्द भने खुट्याएनन् ।
वनेम फागो वंशावली र ‘हज्शन पाण्डुलिपि’ को खण्ड ८५ दाँजेर हेर्दा काङसोरे फागो वनेमका पुर्खा पुष्टि हुन्छ ।
लिम्बू लिपिका सर्जक सिरिजङ्गा ताप्लेजुङको सिनाम नजिकै तेल्लोकका सिं थेबे हुन् भनेर चिनाएको जस पनि चेम्जोङलाई नै जान्छ ।
उनले संकलन गरेका सिरिजङ्गाका उपदेशहरू उल्था गरेर किरात मुन्धुम खाहुन (१९६५/१९८२) छापेका छन् । हज्शन पाण्डुलिपिको खण्ड ८५ मा परेका सिरिजङ्गाका पत्रहरू खुट्याएर उल्था गर्नु चानचुने कुरा थिएन ।
यो किन पनि भने अहिले सिरिजङ्गा लिपिको विकसित रूप पढ्ने/लेख्नेहरूले सिरिजङ्गाले लेखेका पत्रहरू खुट्याउन सकेका छैनन् ।
सिरिजङ्गाको उपदेशले करीब ४०० वर्ष अघिको लिम्बू जातिको व्यवस्था चित्रण गर्छ । चेम्जोङले लेखेजस्तो सिरिजङ्गालाई सरस्वतीले फक्ताङलुङ (कुम्भकर्ण) को फेदमा पुस्तक दिएको कुरा चाहिं पाण्डुलिपिमा छैन ।
चेम्जोङले शरतचन्द्र दासको मत (सन् १८९०) मानेर पहिलो सिरिजङ्गाको तिथिमिति तोकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । दासले सिरिजङ्गालाई सातौं शताब्दीका बौद्ध गुरु पद्मसंभवको अवतार भनेका छन् ।
चेम्जोङले पद्मसंभवको अवतारको रूपमा सिरिजङ्गालाई २०० वर्ष पछाडि प्रस्तुत गरेर नवौं शताब्दीका पहिलो सिरिजङ्गा भनेका छन् । ब्रिटिश लेखक एच.एच. रिस्ले (१८९४/१९७२) ले सिरिजङ्गाको समयलाई पृथ्वीनारायण वा प्रतापसिंह शाहको राज्यकाल भनेका छन् ।
चेम्जोङले रिस्लेलाई पनि पछ्याउँदै विक्रमादित्यको शासनकाललाई आधार मानेर दोस्रो सिरिजङ्गा खडा गरेका छन् । चेम्जोङले दोस्रो सिरिजङ्गा अठारौं शताब्दीको पूर्वार्द्ध मा थिए भनेका छन् ।
तर, हज्शन पाण्डुलिपिका मुन्धुम र खाहुनमा सिरिजङ्गाको नाम बाहेक केही उल्लेख छैन । डा. रमेश ढुङ्गेलले पाण्डुलिपिको खण्ड ८८ मा रुपिहाङले जयप्रकाश मल्ललाई पत्र लेखेको भेटिएको र रुपिहाङ नै सिरिजङ्गा भएको तर्क गरेका छन् । तर, पाण्डुलिपिका अरू खण्डमा रुपिहाङको नाम भेटिंदैन ।
त्यस्तै, प्रेमबहादुर माबोहाङ र भुपेन्द्र शर्मा ढुङ्गेलले लिम्बू भाषा, लिपि पढाउने सिरिजङ्गालाई गोर्खालीहरूले वि.सं. १८४५ मा चैनपुरबाट लखेटेको भनेका छन् । घटनाहरूको समयक्रम हेर्दा सिरिजङ्गाको समय अठारौं शताब्दीको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ ।
चेम्जोङको लेखनमा रिस्लेको पूरै प्रभाव देखिन्छ । रिस्लेले लिम्बूहरूलाई तिब्बतको सङ प्रान्तबाट आएको भन्दै लासा गोत्रे मानेका छन् । चेम्जोङले किरात मुन्धुम खाहुन (१९६५/१९८२) मा सिरिजङ्गाका लेखनी उल्था गर्ने क्रममा ‘सुसुवा लिलिम याक्थुङबा’ को ‘सुसुवा’ लाई ‘सुचुवाङ’ लेखेका छन् ।
अर्थात्, उनले लिम्बूहरू चीनको सुचुवाङ प्रान्तबाट आएको वा सुचुवाङ ल्हासातिर पर्छ भन्नेमा जोड दिए, जुन एकदमै असहज लाग्छ । हज्शन पाण्डुलिपिमा संकलित सिरिजङ्गाका पत्रैपिच्छेजसो उनले आफूलाई ‘सुसुवा लिलिम याक्थुङहाङ’ को सन्तान भनेका छन् । मुन्धुममा लिम्बूहरूलाई सुसुवा लिलिम याक्थुङबाको सन्तान भनेर पुकारिन्छ ।
चेम्जोङले किरात मुन्धुम खाहुनको ‘याक्थुङसाः से खेप्साम्मेओ’ लाई नेपालीमा उल्था गर्दा ‘किराती लिम्बू वंश सबैले सुन्नु’ भनेर लेखेका छन् । यहाँ उनले ‘याक्थुङबा’ लाई ‘किरात’ भनेको स्पष्टै छ ।
तर, ‘किरात’ लिम्बू जातिको जातीय नाम होइन । उनले दशराजाले आठ राजालाई धनु (लिः) ले हानेर (आबुः) हराएको ठाउँ ‘लिम्बूवान’ भएको अनुमान गरेका छन् । योगी नरहरिनाथले २०२२ सालमा संकलन गरेका गोर्खाली शासकका टिपोट र लालमोहरमा याक्थुङबालाई ‘लिम्बू’ भनिएको छ ।
एडेन भान्सिटार्ट (सन् १८९६/१९९२) का टिपोटहरू पनि चेम्जोङले उल्लेख गरेका छन् । उनले सामलुप्लि साँबाहाङ भनेर लेखेका छन् । तमोर खोलाका प्रमुख सामलुप्लि साँबाहाङ लेक्वा साँबा थरका थिए । उनको गढी घुन्साखोला (मुधिङगुम लेक्वा) छेउछाउ थियो ।
थिन्दोलुङ खोयाहाङका गढीको चर्चा गरिएको छ, तर त्यो कहाँ थियो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यो गढी पाँचथरको पञ्चमीमा पर्छ । पाण्डुलिपिको खण्ड ८५ पत्र १४३ को युद्ध वर्णनमा पाइएको अम्फा यक (गढी) कालान्तरमा अम्बरपुर र हक्सि यक हस्तपुर नामकरण भएका हुन् ।
ताक्लुङ खेवाहाङको गढी चाम्लिङ–चिम्लिङ लेखिएको छ । त्यो ठाउँ तेह्रथुम ओख्रेको ताक्लुङ हो ।
चेम्जोङले लिम्बू जातिको साम्योकलुङथिम (दुबोढुङ्गो छुवाएर भैयाद बनाउने), सिङचेप्मा याङ (विवाहलाई मान्यता दिने), सेम्मुइ याङ (छोरीलाई वाग्दान) जस्ता परम्परागत व्यवस्थाहरूको चर्चा गरेका छन् ।
इसाई भए पनि उनले लिम्बू जातिको सनातनी परम्परा मान्न जोड दिएका छन् । उनी बाँचुन्जेल लिम्बू जातिको इतिहास, भाषा, संस्कृति र साहित्यको खोज, अनुसन्धानमै लागे । उनले ब्रह्माण्ड उत्पत्ति सम्बन्धी मुन्धुम संकलन र उल्था गरेका छन् ।
तर संस्कारसँग सम्बन्धित मुन्धुमको टिपोटमा पात्रका नाम, स्थान र कथावस्तु काल्पनिक छन् । त्यसकारण, चेम्जोङको इतिहासमा संशोधन जरूरी छ ।
इतिहासकारको रूपमा इमानसिं चेम्जोङले पुर्‍याएको योगदानको पर्याप्त चर्चा हुनैपर्छ, तर एकोहोरो प्रशंसाबाट नभई आलोचनात्मक टिप्पणीबाट उनको महत्व बढी स्थायी हुनेछ । ११५औं स्मृति दिवसको अवसरमा उनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !